ရင်ခွင်တစ်​ခု ဖန်ဆင်းခြင်း: အတွေ့ နှင့်အားပြိုင်ခြင်း
“မောင်ဟာ မိန်းမရှိတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက် ဆိုတာ ဇင် သိတာ ပေါ့……ဒါပေမယ့်မောင်…..မေဇင်အောင် ဆိုတဲ့မိန်းမ ဟာ တစ်ဘဝ လုံးမှာ တစ်ယောက်ပဲချစ်ခဲ့ ဖူးတယ် အဲလူဟာ မောင်တစ် ယောက် တည်းပဲ….. မောင် ဘာ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ် ဘဝရောက်ရောက် ……မောင်က ဇင့်ချစ်သူ။ ဇင်က တော့ ချစ်နေမှာပဲ …….မောင် ကော …… ဇင့်ကို ချစ်နေတုန်းမဟုတ် လား ဟင်…….. ”
ဓါတ်လှေကားမှ ထွက်လိုက်သည် နှင့် 6-B ဟူသော ရွှေရောင် ဖောင်းကြွ စာလုံးဖြင့် ရေးထား သည့် တိုက်ခန်း နံပါတ်ကို သံပန်းတံခါး၏ နောက်ရှိ ကျွန်းသားတံခါးပေါ်တွင် တွေ့ လိုက်ရသည်။ တိုက်ခန်းဘေး မှန်ချပ်များ ကို စောင်း ငဲ့ ကြည့်လိုက်တော့ ညက အစပျိုးနေပြီ ဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်သည် ပြာလဲ့လဲ့ဖြင့်မှိုင်းနေ၏။ သူ သက် ပြင်းကို အသာချလိုက်မိသည်။ တံခါးခေါက် ရန်ပြင်ထားပြီးမှ တံခါးနှင့် လက်ထိခါနီးတွင် သူ နောက်ကို ပြန်ဆွဲလိုက်မိ သည်။
သူ အသက်ကိုမှန်မှန် ရှူလိုက်ပြီးတံခါးကို မှန်မှန် ခေါက်ဖို့ ကြိုး စား လိုက်သည်။ သူ ချီတုံချတုံ ဖြစ်နေသည်ကို သူမ တွေ့ သွား ၍မ ဖြစ်ပေ။ တံခါးခေါက် လိုက်သော သူ့ လက်က အတော်ပင်အေး စက်နေသည်။ သူ ခေါက် လိုက် သော တံခါးခေါက်သံ သုံးချက်သည် သူ့ နားထဲတွင် အတော် ကျယ်လောင်သွားသလို ရှိသည်။ သူ ရပ်နေ သော ခြောက်လွှာသည် အလွန်တိတ်ဆိတ်နေသည်။ သူ့ ကျော ဘက် ခပ်စောင်းစောင်းတွင် တိုက်ခန်း အမှတ် 6-A ရှိနေသည်။
သူ 6-B တံခါးကို ဘက်ပြန်လှည့်လိုက်တော့မှ သံပန်းတံခါး အတွင်းဘက် ကျွန်းတံခါးကြေးဘောင် တွင် လျှပ်စစ် ဘဲလ်ကို တွေ့ လိုက်ရသဖြင့် သူ့ နမော်နမဲ့နိုင်မှုအတွက် အနည်းငယ် မကျေမနပ် ဖြစ်သွားမိသည်။ ကျွန်းသား တံခါးက အသာပွင့်သွားသည်။ ရင်းနှီးပြီးသာ ရနံ့ တစ်ခုနှင့်အတူ မြမြကလေး အေးနေသော လေက သူ့ ကို အသာ အယာ တွန်းတိုက်သွားသည်။ သူ့ ရင် တဒိန်းဒိန်းခုန်သွားသည်။ နောက်သို့ လည်းခြေလှမ်းတစ်ဝက် လောက် ဆုတ်လိုက်မိသည်။
အပြုံးတစ်ခု၊ ဖြူသွယ်သော လက်တစ်စုံ။ သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို သူ လိုက်ကြည့် နေမိသည်။ တိုက်ခန်းထဲ တွင် မီးဖွင့် ထားဟန် မတူ။ အနည်းငယ် မှောင်ရိပ်ကျနေသည်။ သံတံခါးကို ချပ်ကနဲ မြည်အောင် သူမ ဘေး သို့ တွန်းထုတ်လိုက်သည်။ သူ ကတော့ မလှုပ်ရှားဘဲ ငြိမ်နေမိသည်။ သူ ဝင်ဖို့ လမ်း လေးဖွင့်ပေးကာ သူမက ကျွန်းတံခါးကို မှီနွဲ့ ကာခပ်ရို့ ရို့ လေးရပ်နေသည်။
သူမအသံကတိုးသဲ့သော်လည်း သူကောင်းစွာကြားရသည်။ “မောင်….” တဲ့ ။ သူ့ မျက်လုံးထဲတွင် သူမအစား ကိုယ်ဝန် အရင့်အမာနှင့် ဇနီးသည်“ စိုး” ကိုသာ ဖျတ်ကနဲ မြင်လိုက်မိသည်။ သူမကို ရုတ်တရက်မော့ကြည့် မိ လိုက်သော်လည်း သူ မ၏ “မောင်” ဟူသော အခေါ်အဝေါ်ကို ပြောင်းလဲပစ်ဖို့သူ မပြောလိုက်မိပေ။သူ မ၏ ပေါ့ပါးတဲ့ အပြုံးတွေက သူ့ ရင်ကို အရင်တုန်းလိုပဲ လေးလံသွားစေလေသည်။
သူမ မျက်နှာကို အသေအ အချာ မကြည့်ဖြစ်ခင် တိုက်ခန်းထဲသို့ လှမ်းဝင်လိုက်သည်။ အေးသည်ဆိုရုံလေး ဖွင့်ထားသော လေအေးပေးစက် ကြောင့် တိုက်ခန်းထဲသို့ ဝင်ဝင် ချင်းပင် ချွေးစို့ နေသော သူ့ ကျောပြင်မှာ စိမ့် က နဲဖြစ်သွားသည်။ သူ အိမ် ထဲ သို့ဆက်မဝင်ပဲ သူမတံခါး ပိတ်ပြီးသည် အထိ ရပ်စောင့်နေလိုက်သည်။
Oh, my love,.........my darling,...... I've hungered.....for your... touch............a long, lonely time. And time........ goes by...... so slowly ....... and time....... can do so much, much, ........ are you........still mine?.......I need your love,..........I........ need your love,........ God speed your love ............. to....me.....
“Righteous Brothers” ၏ “Unchanged Melody” သည် သူမ တိုက်ခန်းထဲတွင် တိုးသက်စွာပျံ့ လွင့်နေသည်။ သူမ ဧည့်ခန်းထဲတွင် အလင်းရောင်က ဖျော့တော့နေသည်။ ဤသီချင်းကို ရွေးဖွင့်ထားသည့် သူမ ၏ ရည်ရွယ် ချက် ကဘာလဲ။ ပြတင်းပေါက် တရုတ်ကပ်မှန်များကို ပန်းပွင့် အကြီး ကြီးများ ပါသော အဝါရင့်ရောင် လိုက်ကာ များဖြင့် ကာထားသည်။ သူမ ၏ဧည့်ခန်းသည် ဝါကျန့် သော နံရံကပ် မီးသီး၏ အလင်းရောင် အောက်တွင် အ နည်းငယ် မှုန်ဝါးလို့ နေသည်။ ပရိဘောဂ များကစနစ်တကျ သူ့ နေရာနှင့်သူ ရှိနေသဖြင့် သူမ၏ တိုက်ခန်းလေး သည် သပ်ရပ်လို့ နေလေသည်။
“မောင်…..ဆေးခန်းကို မလာဘဲ ဖုန်းဆက်လိုက်တာ ဇင် နည်းနည်းများ ရိုင်းသွားသလားဟင်……”
သူ့ ကျောပြင် အောက်နားကို နွေးထွေးသော လက်ဖဝါးတစ်ခု ထိကပ်လာသည်ကို ခံစားလိုက်ရသည်။ သူ ကျောကို နည်းနည်း ကော့လိုက်မိသည်။ သူ့ ကို ချုပ်ကိုင်မထားသော်လည်း ကျောကို ချာကနဲ လှည့်ကာ သူမ ၏ လက်မှ အသာရုန်းထွက် လိုက်ရသည်။ သူမ နှင့်သူ မျက်နှာချင်းဆိုင်ရလေပြီ။ သူမ ၏ ပြုပြင်ထားမှု မရှိပဲ လှိုင်းထ ညိုမှောင်နေသော ဆံပင်တို့ က သူမ ၏ ရှင်းလင်းနေသော နဖူးပြင်ထက်တွင် ကဗျာဆန်စွာ လှပနေ သည်။
သူမ မျက်လုံးများကတော့ အနည်းငယ်ဖျော့တော့နေသည်။ သို့ သော် ထိုအားပျော့နေသော မျက်ဝန်းများထဲ တွင် မြင်နေရသော ဆွဲအားတစ်ခုကို တွေ့ လိုက်ရပြန်တော့ သူအနည်းငယ် လှုပ်လှုပ်ရှားရှား ဖြစ်သွားမိ သည်။ သူမ နှုတ်ခမ်းများက အပြုံးစတစ်ခုနှင့်အတူ အသက်ဝင်နေသည်။ သူနဲ့ အကျွမ်းတဝင် ရှိဘူးသည့် သူမ ၏ ခန္ဓာ ကိုယ် သည် သွယ်လျစွာ ဖြင့် စွဲဆောင်မှု ရှိစဲပင်ဖြစ်သည်။
အရောင် ပြယ်နေသော အဖြူရောင် တီရှပ်ပွပွ တစ်ထည်ကို ပိုသီပတ်သီဖြင့် သူမဝတ်ထားသည်။ သူမခန္ဓာ ကိုယ်သည် ထိုတီရှက် အောက်တွင်ပင် သူ ဆက်မကြည့်ရဲဖွယ် ဖြစ်နေသည်။ အနက်ရောင် ပေါ်တွင် ပန်း ပြောက် များလား အဖြူရောင်အစက်များလား မသဲကွဲသည့် လုံချည်ကို ထုံးစံအတိုင်း သူမ ၏ခြေဖမိုးဖုံး သည့် တိုင် အောင် ဝတ်ထားသည်။ သူမ သည် သုံးလေးနှစ်တာကလ အတွင်း များစွာ ပြောင်းလဲမှုမရှိပါချေ။
“မေဇင်အောင်” ဟူသော သူမသည် လွန်ခဲ့ သော ဆယ်စုနှစ် တစ်ခုလုံး သူနှင့်အတူ ရှိနေခဲ့ သော မိန်းမတစ် ယောက်ဖြစ်ခဲ့ လေသည်။ သူ တို့ နှစ်ယောက်ကို မိတ်ဆွေတွေက ပတ်ဝန်းကျင်က ချစ်သူတွေဟု သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ မှန်ပါသည် သူတို့ ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခဲ့ ကြသည်။ သူမသည် သူ့ အား မွမ်းကြပ်မှုတွေနှင့် ကြည်နူးစေခဲ့သော သူ့ ချစ်သူဖြစ်ခဲ့လေသည်။
သူ့ အသံက အနည်းငယ် တုန်ရီနေသည် ဟု သူထင်သည်။ လွန်ခဲ့ သော နှစ်များဆီက သူမ၏ “မောင်” ဟူ သော လူမှာ သူ့ ကိုယ်ခန္ဓာထဲသို့ ဘယ်အချိန်က ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာခဲ့ သည်ကို မသိလိုက်ပါ။ ဟိုတစ်ချိန် တုန်းက လိုပင်သူသည် သူမရှေ့ တွင် ဆယ်ကျော်သက်ကောင်လေး တစ်ယောက်လို ရင်တွေ ခုန် နေ ရစဲ ပါလား ဆိုတာ သူ အံ့အားသင့်စွာသိလိုက်ရသည်။
“မောင်……ကလဲ တခြားလူတွေ မဟုတ်ဘူးဆိုရင် မောင်က ဘာဖြစ်လို့ အဲလိုကြီးဖြစ်နေတာလဲကွာ…..”
“အော် မေ… မောင်က အိမ်ထောင်ကျနေပြီဆိုတော့ အရင်တုန်းကလို…..”
သူမ ၏သေးသွယ်ပျော့ပျောင်းသော လက်ချောင်းလေးတွေက သူ့ နှုတ်ခမ်းတွေကို အုပ်ထားလိုက်သည်။ သူ စကားဆက် မပြောနိုင်တော့။ သူမ လက်ချောင်းလေးများ၏ အထိအတွေ့ ကြောင့်သူ့ နှုတ်ခမ်းသည် အနည်း ငယ် ပွင့်ဟသွားသည်ထင်၏။ ထိုအထိအတွေ့ သည် သူ့ ကိုပို၍ပျော့ပျောင်းသွားစေသည်။ သူမက သူနှင့် ပို၍ ပင် နီးအောင် ကပ်လျှက်…..
“မောင်……အိမ်ထောင်ကျတာ ဇင်သိတယ်……ဒီမှာမောင်…ဒါ ဇင့်အိမ်……ဇင့်အိမ်မှာ….မောင့်မိန်းမ စိုးစိုး မရှိဘူး……မောင့်မိန်းမ စိုးစိုးရဲ့အိမ်မှာ ဇင် မရှိသလို ပေါ့….. လာထိုင်ပါမောင်ရယ်…. ဇင်လေ…. မောင့် ကို ဘယ်လောက် တမ်းတနေရတယ်ဆိုတာ မောင်သိရဲ့ လား……”
သူမ သည်သူ့ လက်မောင်းကို အသာဆွဲကာ ဧည့်ခန်း စက်တီပေါ်သို့ အထိုင်ခိုင်းသည်။ ဤအိမ်ထဲသို့ဝင် လိုက် ကတည်းက သူ့ ကိုယ်သူ ထိမ်းချုပ်မှုကင်း၍ သွားသလို ရှိသည်။ မဟုတ်ဘူး သူဟာ စိုးရဲ့ချစ်လှ စွာ သော ယောက်ျား၊ စိုး လွယ်ထားတဲ့ ကိုယ်ဝန်ထဲက လပိုင်းအတွင်း လူ့ ဘဝထဲကို ဝင်ရောက် လာမယ့် သား ရဲ့အဖေ၊ စိုးကို သူ ချစ်တယ်။ ဟုတ်တယ်….စိုးနဲ့ သားကို သူချစ်တယ်…….
နှစ်ယောက်ထိုင်စက်တီခုံ တွင်သူ ဝင်မထိုင်ပဲ သူမ လက်မှ ရုန်းထွက်ကာ မျက်နှာချင်းဆိုင်က တစ်ယောက်ထိုင် ခုံ တွင်ဝင်ထိုင်လိုက်သည်။ စက်တီစားပွဲတစ်ခု သည် သူမနဲ့ သူ့ ကို ခြားမထားနိုင်သော်လည်း သူ တတ်နိုင်သမျှ သူမ နှင့် ခွာပြီးနေချင်သည်။ သူမ ၏ “မောင်” သူ့ ဆီပြန်ရောက်လာမှကို သူကြိုသိနေသည်ဟု ဆိုကပိုမှန်ပေ လိမ့်မည်။ သူမ မျက်နှာ ညိုသွားသည်။ သူ့ နဖူးတွင် ချွေးတွေပင် သီးလာသည်။
“နေမကောင်း ဘူးဆိုလို့မေ….မောင်လာခဲ့တာလေ…..ဖျားတာလား…….ဘာဆေးသောက်ထားလဲ…….”
“တော်စမ်းပါမောင်ရာ……ဇင့်ကို မောင့်လူနာတွေလို မမေးစမ်းပါနဲ့ ….ဇင် ဘာမှမဖြစ်ဘူး….. ခရီးပန်းရင် …… ဖျားတတ်တယ်ဆိုတာ မောင်သိသားနဲ့ ……”
သူမ အနည်းငယ် ဒေါသဖြစ်သွားဟန်ဖြင့် သူ့ ကိုလေသံမာမာဖြင့် ပြောလိုက်သည်။ သူမ သူ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် နှစ်ယောက်ထိုင် စက်တီခုံပေါ်တွင် အားပျော့နွမ်းနယ်စွာ ထိုင်ချလိုက်သည်။ ခုံနောက်မှီကို ပခုံးစွန်းလေးနှင့် အသာမှေးပြီး ခပ်ပြေပြေလျှောကာ သူမထိုင်နေသည်။ သူမ မျက်လုံးတွေက သူ့ ကို စိုက်ကြည့်နေသည်။
“အင်းလေ….ဖျားတယ်ဆိုရင် ဘာလို့ ဆေးမသောက်တာလဲ…….ခေါင်းကိုက်သလား……ဘာစားထားလဲ….”
“မောင်……တော်စမ်းပါကွာ…..မောင်ကုပေးရမှာက အဲဒီ အဖျားမဟုတ်ဘူး….ဒီမှာ ဒီမှာ ……ဟောဒီ ရင်ဘတ်ထဲက…. ရောဂါသိလား မောင်ရဲ့ …… သိရဲ့ လား ….. မောင်ပဲကုနိုင်တာလေ ……ဇင့်ကို မသနားတော့ဘူးလား မောင်ရယ်…..ဇင် လေ ဇင်မောင့်ကို …..”
သူမ၏နှလုံးသား နေရာကို လက်နှင့်ညွှန်ပြလျက် သူ့ ကို ပြောနေသောသူမသည် သူ့ ကို အတိတ်ဆီသို့ ပြန် လည်ခေါ် ဆောင်သွားနေသကဲ့ သို့ ရှိသည်။ သူ သူမနားကို ထမသွားဘူးဟု ဆုံးဖြတ်လျှက် ထိုင်ခုံတွေ ပေ ထိုင်နေ လိုက်မိသည်။ သူမ ကိုသူ့ တွင်ပြောစရာ စကားမရှိပါ…….။ သို့ သော် သူ့ ကိုယ်သူ ပြန်သတိပေးနေ ရင်းက သူ့ ရင်တွေ မွန်းကြပ် လို့ လာသည်။
သူ လာခဲ့ မိတာမှားပြီလား။ သူ ကျောခိုင်းခဲ့ တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်က ဖုန်းတစ်ချက်လေးဆက်ရုံမျှ ဖြင့် သူ သူမ ဆီ ကို ရောက်လာခဲ့ မိသည်။ သူမ ဆီလာဖို့ ချီတုံချတုံဖြင့် သွားမည်၊ မသွားတော့ဘူးဟု ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ မပြတ် သား ခဲ့ ပေမယ့် မိတ်ဆွေတစ်ယောက် အနေဖြင့် သွားသင့်သည်ဟု သူ့ စိတ် ကျေနပ်အောင် အမည်တပ် လျှက် သူမ ထံသူ ရောက်လာခဲ့ သည်။ သူ့ တွင် မွေးခါနီးဖွားခါနီးကိုယ်ဝန် အရင့်အမာနှင့် ဇနီး ရှိသည်။ သူ အိမ်အပြန်လာကို သူ့ ဇနီးစိုး ကမျှော်နေလိမ့် မည်။ စိုး၏ကွယ်ရာ ၌ပင်ဖြစ်လင့်ကစား စိုးနှင့်သူ့ ကြားထားရှိသော “သစ္စာ”ကို သူ အရောင်မ ထင်းစေလို ပါ။
သူ သည် စိုးအတွက် ခင်ပွန်းကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ရမည်။ အကြာခင် လူ့ လောက ထဲရောက်လာမည့် သား အတွက် ဖခင်ကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်ရမည်။ စာတစ်စောင် မရေးခဲ့ ၊ ဖုန်းတစ်ကောမျှ မခေါ်ဖြစ်ခဲ့ ပဲ သုံးလေး နှစ်မျှ ဝေးကွာနေသော သူ မူးရစ်မက်မောခဲ့ ရသောရင်ခွင်နှင့် သူ့ ရည်းစားဟောင်း၊ သူကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြီး လမ်းခွဲခဲ့ သော ချစ်သူဟောင်းသည် ယခုတော့ သူ့ အကူအညီ လိုအပ်နေသော မိတ်ဆွေဟောင်းတစ် ယောက်သာဖြစ်ရမည်။ ဒီထက် မပိုစေရ။ သူ သည် သူမ နာမကျန်းချိန်တွင် လိုအပ်နေသော ဆရာဝန် တစ် ယောက်သာဖြစ်သည်။
“ မေဇင် မောင်တို့ ……ပြီးခဲ့တာတွေကို….ထပ်မပြောကြပါစို့ လား…..ခု မေဇင်နေမကောင်းဘူးမို့ လား……. ဘာစားချင်လဲ…… မေဇင့်မှာဘာရှိလဲ…. ဒါမှမဟုတ် ကြေးအိုးသောက်ချင်လား….. ဟင်…..ပြော မောင်သွား ဝယ်ပေးမယ်……”
“မေဇင် တဲ့ လားမောင်ရယ်…..ဇင်ကတောင် မောင့်ကို မောင်လို့ ခေါ်ရဲသေးတာ…..မောင်က ဇင့်ကို ဘာလို့ခေါ်နေကျ အတိုင်း ဇင် လို့ မခေါ်ရဲတာလဲ…….ဟင်……ပြောစမ်းပါ……ဇင်ပြော ပြီးပြီနော် ဒါ ဇင့်အိမ် ……မောင့် စိုးစိုးကို ဇင့်အိမ်ထဲ ခေါ်မလာနဲ့ ……ဘာမှလည်း မစားချင်ဘူး ဘာမှလည်း မသောက်ချင်ဘူး မောင့်နားမှာ နေချင်တာ……မောင်……. ဇင့်ကို မောင့်ရင်ခွင်မှာ ခဏတော့ နေခွင့်ပြုပါနော်…..ဇင်လေ မောင်နဲ့ဝေးသွား က တည်းက နေလို့ ကို မပျော်တာ ပါကွယ်……”
သူမသည် ပြောရင်းက ထိုင်ရာကထလျှက် သူ့ အနားသို့ တိုးကပ်လာသည်။ သူမ မျက်ဝန်းထဲက မျက်ရည်စ တ ချို့ကိုသူ တွေ့ လိုက်ရသည်။ သူ သူမဝမ်းနည်းနေတာကို သနားမိပြီလား။ မဟုတ်ဘူး ဒါက သဘာဝပဲ လူတစ် ယောက် အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးတစ်ယောက် ငိုတဲ့ အခါ ဘေးကဘာမှ မဆိုင်တဲ့ သူတွေကတောင် သနား တတ်သေး တာပဲ။ ပြီးတော့ သူက ဆရာဝန်လေ လူမမာတွေကို တွေ့ ရင် သူ အမြဲ သနားစိတ်ဝင်မိ သည်ပဲ။
သူမသည် မှိန်ဖျော့သော မီးရောင်အောက်တွင်ပင် လှပလို့ နေသည်။ စိုးနဲ့မေဇင်အောင် က ဘယ်သူပို လှလဲ လို့ များတစ်ယောက် ယောက် က မေးခဲ့ ရင် မေဇင်အောင်က ပိုလှတာပေါ့ လို့ အမှန်အတိုင်းဖြေမိမည်သာ။ သူမ ၏လှိုင်းတွန့် နေသော ဆံစတွေကြားတွင် သူမ၏သွယ်ပျောင်းသော မျက်နှာသည် ပကတိ ဝင်းပလို့ နေ သည်။ သူမ ၏မျက်ဝန်းတွေက သာ ရယ်မောနေခဲ့ ရင်၊ သူမသည် လိုတိုင်းတ ရနိုင်သော နတ်သမီးတစ်ပါ ဖြစ်ုလို့ သွားမည်။
“ဇင့်ကို ….. မောင်ထားခဲ့တုန်းကလေ ဇင်တော့ အရူးတစ်ပိုင်းပဲမောင်ရယ်…..ဇင့်မှာ မောင့်ရယ်သံတွေကို လွမ်းရ၊ နေမကောင်းတဲ့ အခါ ဇင့်နဖူးကို ပါးလေးကပ်ပြီးစမ်းတတ်တဲ့ မောင့်ကို လွမ်းရ နဲ့ မောင်ရယ်….. မောင် လား….. ဇင် မောင့်ကို တစ်ရက်ကလေးတောင် မေ့မရပါဘူး မောင်…….ဇင်လေ မောင့်ကို….. ချစ်တယ် မောင် ရယ်….. ချစ်တယ်…..”
“မောင်ဟာ မိန်းမရှိတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက် ဆိုတာ ဇင်သိတာပေါ့……ဒါပေမယ့်မောင်…..မေဇင်အောင် ဆိုတဲ့မိန်းမ ဟာ တစ်ဘဝလုံးမှာ တစ်ယောက်ပဲချစ်ခဲ့ ဖူးတယ် အဲလူဟာ မောင်တစ်ယောက်တည်းပဲ….. မောင် ဘာ ဖြစ်ဖြစ် ဘယ် ဘဝရောက်ရောက် ……မောင်က ဇင့်ချစ်သူ။ ဇင်က တော့ ချစ်နေမှာပဲ …….မောင် ကော…… ဇင့်ကို ချစ်နေတုန်းမဟုတ် လား ဟင်…….. ”
သူမ သူ့ အနားသို့ စကားတွေပြော နေရင်းက နီးကပ်လာသည်။ သူ ထိုင်နေသော စက်တီခုံလက်ရမ်းကို ကိုင် လျှက် သူမ ကိုယ်ကို သူ့ ဆီသို့ ညွှတ်ကိုင်း လိုက်သည်။ သူမ၏ ဝင်လေထွက်လေတို့ သည် သူ့ မျက်နှာကို ညံ့ ညံ့သဲ့သဲ့ တိုးခတ်လို့ နေသည်။ သူမ ၏ဖူးစွသော နှုတ်ခမ်းတို့ သည် သခင်ဟောင်းကို ပြန်တွေ့ သည်အားလား မြူးကြွ လှုပ်ခတ်လို့ နေသည်။ သူမကိုယ်မှ ပျံ့ လွင့်လာသော သင်းပျံ့ သည့်ရနံ့ တို့ သည် သူ့ ရင်ကို ကြီးစွာခုန် အောင် နှိုးဆွနေသည်။
သူမ ဖန်တီးထားသော ဥယျာဉ်ထဲသို့ သူရောက်သွားသည်။ သစ်ပင်ပန်းမန်များဖြင့် ဝေဝေဆာဆာ လှပနေ သော ရေကန်ကြီးတစ်ခု၊ ပုဇဉ်းလိပ်ပြာငယ်တို့ ဖြင့် တင့်တယ်နေသော ပန်းဥယျာဉ်ကြီး။ သူ့ ရင်ထဲ ငြိမ့်ကနဲ အေးသွားသည်။ သူမ နှုတ်ခမ်းများ သည် သူ့ ကိုထို ပန်းဥယျာဉ်ထဲသို့ ခေါ်ဆောင်သွားသည်။ သူ့ နားထဲတွင် Righteous brothers ၏ “Unchanged Melody” ကိုဆက်ပြီး ကြားနေရသည်။ သူမ ထိုသီချင်းကို တိုးသက်စွာ ဖွင့် လျက် repeat mode ပေးထားပုံရသည်။ သူမ ဟာတကယ်ပဲ သူ့ ကို အဲဒီပန်းဥယျာဉ်ကြီးထဲ ခေါ်ဆောင် သွားဖို့ များစွာ ပြင်ဆင်ထားခဲ့ ဟန်တူလေသည်။
Oh, my love,…. my darling,…… I’ve hungered….. for your….. touch…………….along, lonely time. And time…….. goes by……. so slowly……… and time……. can do so much,….. are you……. still mine? ………….I need your love,……….. I……… need your love,……. God speed your love…. To……… me!
သူမ ပြောချင်သော စကားများကို ထိုသီချင်းစာသား များမှတဆင့် သူကြားနေသကဲ့သို့ ရှိသည်။ အဖျားသွေး ရှိနေ၍ လားမသိ သူမ၏နှုတ်ခမ်းတွေက ပိုမိုနွေးထွေးနေသလို ရှိသည်။ သူမ သာလျှင် ဤအနမ်းများကို တမ်း တနေခဲ့ သည် မဟုတ်။ သူလည်း တောင့်တ လွမ်းဆွတ်နေခဲ့ သည်ဆိုတာ သူယခုမှ ပင်ရှင်းလင်းစွာသိလိုက် ရသည်။ သူမ ၏နွေးထွေးနေသော လက်နှစ်ဖက်တွင်းက သူ့ မျက်နှာသည် တရှိန်းရှိန်းပူနွေးလာသည်။ သူမ ၏ ခန္ဓာကိုယ်မှ ကူးစက်ပျံ့ နှံလာသော အနွေးဓါတ်တွေသည် သူ့ ခန္ဓာကိုယ်သို့ တစစ စီးကူးလာသည်။ သူ မျက်စိ ကို မှေးထားလျှက်က ရုတ်တရက် မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်။
သူ နားထင်သို့ တိုးလာသော သွေးဖိအားမှာ ရုတ်တရက် လွန်စွာတိုးမြင့်သွားသလို ခံစားလိုက်ရသည်။ ခေါင်းထဲ တွင် ဒုတ်ကနဲ ဒုတ်ကနဲ ပင်မြည်သွားသည်။ သူမြင်လိုက်ရသော မျက်နှာသည် မေဇင်အောင့် မျက်နှာမဟုတ် ပေ။ အနည်းငယ်မို့ အစ်နေသော မျက်ဝန်းတွေနှင့် မျက်နှာတစ်ပြင်လုံးတွင် သနပ်ခါးဖို့ ၍ သွားပွတ်တံလေးနဲ့ခြစ် ထားသဖြင့် ညီညီ ညာညာအစင်းလေး ဖြစ်နေသော ပါးပြင်တွေ…….ဘုရား…ဘုရား….စိုး…..စိုး…
သူ…..သူမကို နောက်သို့တွန်းပစ်လိုက်မိသည်။ ထိုင်နေရကလဲ ဝုန်းကနဲ ထလိုက်မိသည်။ သူမ နောက်သို့ယိုင်ကျသွားသည်။ စက်တီခုံ နှစ်ခုကြားက စားပွဲပေါ်သို့ သူမ ထိုင်လျှက် ကျသွား၍ သာတော်တော့သည်။ သူမ မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်တွေနဲ့ကြေကွဲဆို့ နင့်နေသော သူမရဲ့ မျက်နှာ…. သူ့ ရင်ထဲတွင် စစ်ကနဲ နာကျင်သွား မိ သည်။ သူ…. သူမကို တွန်းလိုက်မိပြီ။ သူမကို ဘယ်တုန်းက မှ ဒီလို ကြမ်းကြမ်း တမ်းတမ်း မဆက်ဆံခဲ့ ဖူး ပါ လား။ သူမ နာကျင်သွားမှာ သူစိုးရိမ်သွားမိသည်။
မဟုတ်ဘူး……. သူမကို သူ တက်မက်တာ မက်မောတာ…… သူမချစ်ခဲ့ ပါဘူး။ မချစ်ခဲ့ လို့ လဲ သူမကို ထားခဲ့ပြီး စိုးကို လက်ထပ်ခဲ့ သည်ပဲ။ ဒီလောကမှာ စိုးကလွဲရင် သူ ဘယ်သူကို မှ မမက်မောချင်ဘူး။ သို့ ပေမယ့် သူ့ခန္ဓာကိုယ်က သူ့ မသိစိတ်က ဖြစ်ပေါ်နေသော တောင့်တမှုများကို ပြန်အသက်သွင်း နေတာပါလား။ မေဇင် အောင်ရဲ့ မောင်ဆိုတဲ့ လူဟာ လွန်ခဲ့ သော လေးနှစ် ကတည်းက သေဆုံးသွားခဲ့ ပြီ။ အဲဒီမောင် ဟာ စိုးရဲ့ ကိုကို အဖြစ် အသစ်တဖန် ပြန်လည် ရှင်သန်လာခဲ့ ပြီ။ မေဇင်အောင် ဆိုတာ သူ့ ဘဝမှာမရှိတော့………..။
သူ သူမကို ထူပေးသင့်လား…..မထူနဲ့ ။ သူမ နာကြည်းသွားပါစေ။ သူမ သူ့ ကို မုန်းသွားပါစေ။ သူမကို ထူဖို့ သူ ကြိုးစားခဲ့ လျှင် သူမ၏ အတွေ့ တွေကို သူ မလွန်ဆန် နိုင်မည်ကို စိုးသည်။ သူ့ စိတ်က ပျော့သည်။ သူသည် ပျော့ညံ့သော ယောက်ျားတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ သစ္စာတရားကို အထိအတွေ့ ကြောင့် သူဖျက်စီးမိမည်ကို သူ စိုးရိမ်သည်။ စိုး ရဲ့ အပြစ်ကင်းစင် ပြီးကျက်သရေ ရှိနေတဲ့မျက်နှာ၊ ရင်သွေး ကိုလွယ်ထားရသော မိခင် လောင်းတစ်ယောက်၏ အားအင်များဖြင့် တင့်တယ်နေတဲ့ မျက်နှာကို သူ တွေးကြည့်ရုံမျှဖြင့် မကြည့်ဝံ့တော။
စိုး……ဟုတ်တယ်။ စိုး…ကို ကိုကို ချစ်တယ်…..သားကိုလည်း ချစ်တယ်……သူ့ မျက်လုံးထဲသို့ မေဇင်အောင် ၏ ညိုးနွမ်း ဖျော့တော့သော မျက်နှာ လှလှလေးဝင်ရောက်လာပြန်သည်။ သူမရဲ့ အနမ်းတွေ နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာ သည့်တိုင် မပြောင်းလဲသေး။ သူ့ ကို ရစ်ပတ်နှောင်ဖွဲ့ နေတုန်းပင်ဖြစ်သည်။ သူမ မျက်နှာက အင်မတန် အားငယ်လျှက် မျှော်လင့်ချက်တွေ ကုန်ဆုံးနေသော အသွင်ဖြင့်။ သူ သူမကို သနားသွားမိသည်။ သူမ လိုချင် သော သူ့ ရင်ခွင်သည် ထိုမျှ အဖိုးတန်လေသလော….။ သူ ဘာလို့ သူမကို လက်မထပ်ခဲ့ သနည်း။
“ရက်စက်လိုက်တာ မောင်ရယ်……. ဇင့်ကို ….. ဒီလောက်တောင် ခါးခါးသီးသီးဖြစ်သွားပြီလား….ဟင်…”
သူမ ငိုရှိုက်နေသည်။ သူက မွန်းကြပ် တွေဝေလျှက် ငူငူကြီးရပ်နေမိသည်။ ခုအချိန် သူမကို သူသာ မထူ၍ နှစ် သိမ့်လိုက်ပါလျှင် သူ သူမကို လက်မလွှတ်နိုင်ဖြစ်သွားလိမ့်မည်။ သို့ သော် သူမကို ကြည့်ရသည်မှာ သူ့ ရင်ထဲ နာကျင်လာသည်။ သူမ တော့သူ့ ကို နာကြည်းမုန်းတီး သွားလေပြီလားမသိ။ သူကတော့ ရင်တွေနာနေသည်။ ထို့ နောက်သူ စိုးရွံ့နေသည်။ သူ သက်ပြင်းကို အသာရှိုက်လိုက်သည်။
သူ့ စိတ်၏ဆန္ဒသည် သူ့ ကိုမကျော် လွှားနိုင်စေရ။ သူ ပြန်မှဖြစ်မယ်……. သူအမှား မခံနိုင်ဘူး…… စိုးကို စိတ်မဆင်းရဲစေရဘူး။ သူ သည် စိုးဟူ သော သူ့ ဇနီးအတွက်သာ ဖြစ်ရမည်။ စိုးရင်ခွင် တွင်သာ သူပျော်သည်။ အိမ်ထောင်သက် လေးနှစ်ရလာပြီ ဖြစ်သော်လည်း မိမိ မယားမှ တပါးသော မိန်းမတွင် သူ၏ပျော့ညံ့မှု ကြောင့် တဒင်္ဂ သာယာခဲ့မိ သည့် အ တွက် သူ့ ကိုယ် သူလည်း ရှက်မိသည်။
မေဇင်အောင့်အတွက် လိုအပ်သော ဆေးများကို သူ့ ဆေးအိပ်ထဲမှာ ခပ်မြန်မြန်ထုတ်ယူလိုက်သည်။ ထို့ နောက် သူမ ထိုင်နေသော စားပွဲပေါ်တွင် အိတ်ကလေးများ နှင့်ထည့်ကာ ထားခဲ့ သည်။ သူ ဆေးအိပ်ကို ဆွဲလျှက်က သူမကို ငဲ့ ကြည့်လိုက်သည်။ သူမသည် အသက်မဲ့သော မိန်းမတစ်ယောက်လို ငြိမ်သက်နေသည်။ သူမ မျက်နှာ သည် ခံစားချက် ကင်းမဲ့ လို့ နေသည်။ သူ့ ကိုကျော်လွန်၍ ဧည့်ခန်းနံရံကိုသာ အဓိပ္ပါယ်မဲ့ စွာငေးကြည့် နေသည်။
“မေဇင်…. မောင်သွားတော့မယ်….. ဆေးသောက်လိုက်နော်…….အနားယူလိုက်ရင် ကောင်းသွားမှာပါ……. မောင် သွားမယ်………”
သူမ တုံ့ ပြန်မှုမရှိပါ။ Unchanged melody သည် သူမ၏ ဧည့်ခန်းထဲတွင် ဆက်လက်ပျံ့ လွင့်နေသည်။ သူ သူမ ကိုပိုက်ထွေးလျှက် သူမဆံစတွေကို မနမ်းမိအောင် လက်သီးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားလိုက်မိ သည်။ သူ သူမကို ဒုတိယအကြိမ် ကျောခိုင်း လိုက်ရပြန်လေပြီ။
......I've hungered .... for your.... touch................................. I need your love,....... I...... need your love,.... God speed your love......to..... me!
ကျွန်းတံခါးကို ဖွင့်လိုက်သည်နှင့် လတ်ဆတ်သော လေက သုတ်ကနဲ တိုးလာသဖြင့် သူအနည်းငယ် လန်းဆန်း သွားသည်။ သောမခတ်ဘဲ ချိတ်ရုံချိတ်ထားသော သံပန်းတံခါးကို သူအသာ တွန်းဖွင့်လိုက်သည်။
“မောင်….. မောင်…. ဇင့်ကို ထားမသွားပါနဲ့ မောင်ရယ်…..ဇင်လေ မောင်မရှိရင်……. မောင်မရှိရင်……ဟင့်”
သူမသည် သူ့ ကို နောက်ကျောဖက်ဆီက သိုင်းကာဖက်လျက် ရှိုက်ငင်ငိုကြွေးလေသည်။ သူ တံခါးဝမှ ရှေ့ဆက် ထွက်မသွားနိုင်ပဲ ရပ်နေလိုက်ရသည်။ သို့ သော် ယခု သူ တည်ငြိမ်နေပါသည်။ သူမလက်တွေကို အသာ ဖြည်ချ လိုက်သည်။ သူမ ခန္ဓာကိုယ်က တလှိုက်လှိုက် တုန်နေသည်။ သို့ သော် ပထမဆုံး အကြိမ်သူမကို ကျော ခိုင်းခဲ့ စဉ်ကလောက် မခက်ခဲတော့ပဲ သူမကို သူထားခဲ့ နိုင်နေပြီဖြစ်သည်။ သူမ ငိုရှိုက်သံသည် သူနှင့် ဝေး၍ သွားသည်။ ဓါတ်လှေကား မစောင့်တော့ပဲ လှေကားအတိုင်း သူ အပြေးဆင်းလာခဲ့ မိသည်။
သူ ကားဆီသို့ ချဉ်းကပ်သွားရင်းက ကောင်းကင်ကို မော့ကြည့်လိုက်သည်။ တဝက်သာရှိသော ငွေလ ၏ အ လင်း ရောင် ဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်သည် အေးမြ လျှက် ရှိသည်။ မိတ်တုတ် မိတ်တုတ်လင်းနေသော ကြယ်တွေက လခြမ်း ၏အလင်းရောင်ကို အားဖြည့်ပေးနေသလို ရှိသည်။ သူ အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ အခါ ဗိုက်ကလေးကို မလျှက် အိမ် ရှေ့ ဝရန်တာတွင် ခေါက်တုံ့ ခေါက်ပြန် လမ်းလျှောက်နေ မည်ဖြစ်သော ဇနီး ဖြစ်သူ စိုးကို မြင်ယောင်မိ သည်။ စိုးရေ….. ကိုကိုပြန်လာပြီ။ စိုးကို ကိုကို ချစ်တယ်………
မြင်းက အညိုရောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် Allan တို့ သုံးယောက်ဖြေတဲ့ အဖြေတွေ အားလုံးမှန်နေလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ အညိုတော့ မဟုတ်ဘူး။
အနက်ရောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အကုန်မှားကုန်မှာ ဆိုတော့ ဒါလဲ အဖြေမဟုတ်ပြန်ဘူး။
ဒါကြောင့် မြင်းဟာ မီးခိုးရောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်သူ့ အဖြေမှန်လဲဆိုရင် Allan မှန်ပါတယ်။ Brian မှန်ပါတယ်။ Charlie မှားပါတယ်။
**************** *************** ************ *********** ********
ကျွန်တော့်ရဲ့“ရင်ခွင်တစ်ခု ဖန်ဆင်းခြင်း” ဘလော့လေးကို လာလည်တဲ့ အတွက် အရမ်း ကျေးဇူး တင်ပါတယ်....ကျွန်တော့်ရဲ့ မတတ် တတတ်နဲ့ ရေးထားတဲ့ စာလေးတွေကို ဝေဖန်ပေး သွားရင် တော့.... အတိုင်း ထက်လွန် ပါပဲဗျာ....ပြောမပြနိုင်အောင်ပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.....
Posted by yangonthar at 9:40 PM
အရမ်းတော်တဲ့ ယောင်္ကျားပဲ...။ ဒီလိုယောင်္ကျားတကယ်ပဲ ရှိသလားးးး
ဒါက ၁ချက်..စိုးအတွက် ကောင်းတဲ့သစ္စာရှင် အဖြစ် ချီးကျူးတာပါ။
နောက်တချက်က ..သူက ဘာဖြစ်လို့ မေဇင့်ကို ထားခဲ့ရတာလဲ..။ ယောင်္ကျားတယောက်က တကယ်မချစ်ပဲနဲ့ ဆိုရင် မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့ မေဇင်က သနားဖို့ကောင်းပါတယ်။ မေဇင့်အတွက်တော့ သူပက်သက်ခဲ့တဲ့ မောင်ဟာ ယောင်္ကျားကောင်းမဟုတ်ခဲ့ဘူး။ အဲဒီအတွက် သစ္စာမရှိတဲ့
ယောင်္ကျားတွေအတွက်တော့ ယူတတ်ရင် သင်ခန်းစားပေးတဲ့ ဇာတ်လမ်းတိုလေး တပုဒ်ပေါ့...အပြင်မှာရော...ကျနော်တို့တွေ
အဲလို တစ်ခါတစ်လေမှာ ဖြစ်နိုင်လား...ခဏတာရဲ့ စိတ်စေစားမှုက
အရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် အစ်ကိုရ...လာဖတ်သွားတယ် အစ်ကို
အားပေးနေပါတယ် .. တကယ်ဖတ်လို့ ကောင်းပါတယ် ..
ဒါပေမယ့် ရည်းစားဟောင်းခေါ်တာကို မသွားဘဲ နေနိုင်တဲ့ လူ ရှိလား မသိဘူးနော် .. စဉ်းစားသွားပါတယ် :D
စိတ်၂ခု အားပြိုင်ဖြစ်နေပုံကို ရေးထားတာကြိုက်တယ်.. အားပေးနေပါတယ်..
ထားခဲ့တဲ့အကြောင်းတော့ရှိမှာပါ သနားစရာလေးပဲ ထားခံရတဲ့မိန်းကလေးကတော့
ကျွန်တော်တို့ အိမ်ရဲ့ ရေချိုတွင်း
မမ ပေးခဲ့ တဲ့ အိပ်မက်လှလှတွေ
ဝါဆို ဝါခေါင် ရေတွေကြီးတော့